Venezoela: Nakatona ny Sary amin’ny Twitter, mbola mitohy ny fihetsiketsehana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 16 Avrily 2019 3:15 GMT
Vakio amin'ny teny Español, Português, Français, 繁體中文, 简体中文, বাংলা, English
Omaly, roa andro taorian'ny hetsi-panoherana goavana nanerana ny firenena, nitatitra olana maromaro amin'ny fidirana amin'ireo tranonkala sasantsasany ny mpiserasera Venezoeliana. Voalaza fa nosakanana ireo tranonkala maromaro, ary tsy afaka nijery sary sy lahatsary ao amin'ny tranonkala tambajotra sosialy ny mpisera Twitter, izay tena nilaina tamin'ny fifandraisana tamin'ireo mpanao fihetsiketsehana. Gabriel Bastidas, mpanao gazety Venezoeliana, nilaza tao amin'ny Twitter hoe:
Tamin'ny Alakamisy, nanambara i William Castillo, Filohan'ny Vaomieran'ny Fifandraisandavitra Venezoeliana, CONATEL fa mety hiteraka fandikan-dalàna momba ny andraikitra ara-tsosialy amin'ny Radio, Televiziona ary ny media Elektronika ny fitantaran'ny haino aman-jery ny hetsi-panoherana. Nanakana tranonkala ny governemanta Venezoeliana nandritra ny taona maro, noho ny antony maro samihafa, ary fanakanana marobe no nipongatra tamin'ny volana novambra lasa teo, raha nanambara ny filoha Maduro fa misy ny fepetra raisina ho an'ireo tranonkala mitatitra momba ny vidiny tsy ofisialy amin'ny vola vahiny. Tamin'ny Asabotsy lasa teo, nilaza i Castillo fa nanakatona tranonkala miisa 384 ny governemanta noho io antony io:
Ny zoma, nitohy ny tatitra momba ireo olana amin'ny fidirana amin'ireo tranonkala hafa, tahaka ny Pastebin.com, Facebook sy Twitter. Namoaka fanambarana ny CANTV ny zoma tolakandro, izay mandà akintsirano ny fifandraisany tamin'ny fanakanana sary tao amin'ny Twitter.